ကိုရင်လေးရဲ့ မေတ္တာသုတ်တရားတော်နာ ရွတ်ဆိုသွားတဲ့(ရုပ်သံ)??? – အနုပညာရပ်ဝန်း
ကိုရင်လေးရဲ့ မေတ္တာသုတ်တရားတော်နာ ရွတ်ဆိုသွားတဲ့(ရုပ်သံ)???
? မေတ္တာသုတ် ? မေတ္တာသုတ် ပါဠိ၊ အသံထွက်၊ မြန်မာပြန်၊ ရွတ်ဖတ်ရခြင်းအကျိုး။ပြန်လည်မျှဝေ ဒါနပြုပါတယ်။??????????မေတ္တာသုတ်မှာ အဓိက အချက်တစ်ချက်ပါတယ်” ဘယ်သူ့အပေါ်မှာ မဆို မိမိရင်မှဖြစ်သော တစ်ဦးတည်းသော သားသမီးကဲ့သို့ မေတ္တာထားပါလို့ ”မေတ္တာဆိုတာ အသွားအပြန်ရှိပါတယ် သေသေချာချာ မေတ္တာပို့ရင်း သတ္တဝါအားလုံးအပေါ်မှာ မေတ္တာထားနိုင်ကြပါစေ…
၁။ ယဿာ နုဘာဝတော ယက္ခာ၊ နေဝ ဒေဿန္တိ ဘီသနံ။ယမှိ စေဝါ နုယုဥ္ဇန္တော၊ ရတ္တိန္ဒိ၀ ‘ မ တန္ဒိတော။ ၂။ သုခံ သုပတိ သုတ္တော စ၊ ပါပံ ကိဥ္စိ န ပဿတိ။ဧဝမာဒိ ဂုဏူပေတံ၊ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။ ၃။ ကရဏီယ’ မတ္ထ ကုသလေန၊ ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမေစ္စ။သက္ကော ဥဇူ စ သုဟု ဇူ စ၊ သုဝစော စဿ မုဒု အနတိမာနိ။ ၄။ သန္တုဿကော စ သုဘရော စ၊ အပ္ပကိစ္စော စ သလ္လဟုကဝုတ္တိ။သန္တိန္ဒြိယော စ နိပကော စ၊ အပ္ပဂဗ္ဘော ကုလေသွ ‘ န နုဂိဒ္ဓေါ။ ၅။ န စ ခုဒ္ဒ ‘ မာစရေ ကိဥ္စိ၊ ယေန ဝိညူပရေ ဥပဝဒေယျုံ။သုခိနော ၀ ခေမိနော ဟောန္တု၊ သဗ္ဗသတ္တာ ဘဝန္တု သုခိတတ္တာ။ ၆။ ယေ ကေစိ ပါဏဘူတ’တ္ထိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာဝ နဝ သေသာ။ဒီဃာ ဝါ ယေဝ မဟန္တာ၊ မဇ္ဈိမာ ရဿကာ အဏုက ထူလာ။၇။ ဒိဋ္ဌာ ဝါ ယေဝ အဒိဋ္ဌာ၊ ယေဝ ဒူရေ ၀သန္တိ အဝိဒူရေ။ဘူတာ ၀ သမ္ဘဝေသီ ၀၊ သဗ္ဗသတ္တာ ဘဝန္တု သုခိတတ္တာ။ ၈။ န ပရော ပရံ နိကုဗ္ဗေထ၊ နာတိမညေထ ကတ္ထစိ န ကဥ္စိ။ဗျာရောသနာ ပဋိဃသည ၊ နာညမညဿ ဒုက္ခ ‘ မိစ္ဆေယျ။ ၉။ မာတာ ယထာ နိယံပုတ္တ၊ မာယုသာ ဧကပုတ္တ ‘ မနုရက္ခေ။ဧဝမ္ပိ သဗ္ဗဘူတေသု၊ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ ၁၀။ မေတ္တဥ္စ သဗ္ဗလောကသ္မိံ၊ မာနသံ ဘာဝယေ အပရိမာဏံ။ဥဒ္ဓံ အဓော စ တိရိယဥ္စ၊ အသမ္ဗာဓံ အဝေရ‘မသပတ္တံ။ ၁၁။ တိဋ္ဌံစရံ နိသိန္နောဝ၊ သယာနော ယာဝတာ‘ဿ ဝိတမိဒ္ဓေါ။ဧတံသတိံ အဓိဋ္ဌေယျ၊ ဗြဟ္မ‘မေတံ ဝိဟာရ မိဓ‘မာဟု။ ၁၂။ ဒိဋ္ဌိဥ္စ အနုပဂ္ဂမ္မ၊ သီလဝါ ဒဿနေန သမ္ပန္နော။ကာမေသု ဝိနယ ဂေဓံ၊န-ဟိ ဇာတုဂ္ဂဗ္ဘ သေယျ ပုန ရေတိ။မေတ္တ သုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။
မေတ္တာသုတ် မြန်မာအသံထွက် ရွတ်ဖတ်နည်း၁။ ယတ်သာ နုဘာဝတော ယက်ခါ၊နေဝ ဒတ်သင်တိ ဘီသနံ။ယင်ညှိစေဝါ နုယုန်ဇန်တော၊ ရက်တိန် ဒိ၀ ၊ မ-တန်ဒိတော။၂။ သုခံ သုပတိ သုတ်တောစ ၊ ပါပံကိန်စိ န-ပတ်သတိ၊အေဝ မာဒိ ဂုဏူပေတံ၊ ပရိတ်တံ တံ-ဘဏာမဟေ။ ၃။ ကရဏီယ မတ်ထကုသလေန၊ယန်တ သန်တံ ပဒံ အဘိသမစ်စ၊သက်ကော အုဇူ-စ သု ဟုဇူ-စ၊ သုဝစော စတ်သ မုဒု အနတိမာနီ။ ၄။ သန်တုတ်သကော စ သု ဘရော စ၊အပ်ပကိတ်စော စ သန်လဟုက ဝုတ်တိ။သန်တိန် ဒရိယော-စ နိပကော-စ၊အပ်ပဂပ်ဘော ကုလေသွ, န-နုဂိတ်ဓော။ ၅။ န စ ခုတ်ဒ, မာစရေ ကိန်စိ၊ယေန ဝိန်ညူ ပရေ ဥပ-၀ဒေယုံ။သုခိနော ၀ ခေမိနော ဟွန်တု၊သပ်ဗ သတ်တာ ဘဝန်တု သုခိတတ်တာ။
၆။ ယေ ကေစိ ပါဏ ဘူတတ်ထိ၊တသာ ဝါ ထာဝရာ ၀၊ နဝ သေသာ။ဒီဃာ ဝါ ယေဝ မဟန်တာ၊မစ်စျိမာ ရတ်သကာ အဏုက ထူလာ။ ၇။ ဒိတ်ထာ ဝါ ယေဝ အ ဒိတ်ထာ၊ယေဝ ဒူရေ ၀သန်တိ အ ဝိဒူရေ။ဘူတာဝ သမ်ဘဝေ သီဝ၊သပ်ဗ သတ်တာ ဘဝန်တု သုခိတတ်တာ။ ၈။ န ပရော ပရံ နိကုတ်ဗေထ၊နာတိမင်ညေထ ကတ်ထစိ န ကိန်စိ။ဗျာရောသနာ ပတိဃ သင်ည၊နင်ည မင်ညတ်သ ဒုတ်ခ မိတ်ဆေယ။ ၉။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတ်တ၊မာယုသာအေက ပုတ်တ မနုရက်ခေ။အေဝမ်ပိ သပ်ဗ ဘူတေသု၊မာနသံ ဘာဝေယေ အ-ပရိမာဏံ။ ၁၀။ မစ်တင်စ သပ်ဗ လောက သမိန်၊မာနသံ ဘာဝယေ အ ပရိမာဏံ။တ်ဓံ အဓော စ တိရိယင်စ၊အ သမ်ဗာဓံ အဝေရ မ သပတ်တံ။၁၁။ တိတ်ထံ စရံ နိသိန်နော ၀၊အ သမ်ဗာဓံ အဝေရ မ သပတ်တံ၊သယာနော ယာဝတတ်သ ဝိတ မိတ်ဒေါ။အေတံ သတိန် အဓိတ်ထေယ၊ဗြန်မ, မေတံ ဝိဟာရ, မိဓ, မာဟု။ ၁၃။ ဒိတ်ထိန်စ အနုပက်ဂမ်မ၊ သီလ ဝါ ဒတ်သနေန သမ်ပန်နော။ကာမေသု ဝိနယ ဂေဓံ၊န ဟိ ဇာတုတ်, ဂပ်ဘ, သေယ ပုန ရေတိ။မစ်တ သုတ်တံ နိတ်ထိတံ……။ ???????????? မေတ္တသုတ် ရွတ်ဖတ်ခြင်းအကျိုးချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ရနိုးရစေသည်။ အိပ်မက်ဆိုးများ မမက်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။ မျက်နှာ ကြည်လင်၍ လူချစ်လူခင် များလိမ့်မည်။ အိပ်ခါနီးဆဲဆဲမှာ ရွတ်ပြီးအိပ်လျှင် ညအခါ ဘီလူးစီးခြင်း၊ ယောင်ယမ်း၍ ထပြေးခြင်း၊ အိပ်နေရင်း အသံနက်ကြီးဖြင့် အော်ခြင်း၊ အိပ်ရာနားရှိ တွေ့ကရာ ပစ္စည်းတို့ဖြင့် ယောင်ယမ်းပြီး ပစ်ပေါက်ခြင်း စသည်တို့ ကင်းသည်။ ထိုသို့ဖြစ်တတ်သူများသည် အထူးတလည် မေတ္တသုတ်ကို ရွတ်သင့်ပေသည်။
? ေမတၲာသုတ္ ?ေမတၱာသုတ္ ပါဠိ၊ အသံထြက္၊ ျမန္မာျပန္၊ ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳး။ျပန္လည္မ်ွေဝ ဒါနျပဳပါတယ္။????????????ေမတၲာသုတ္မွာ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ပါတယ္'' ဘယ္သူ႔အေပၚမွာ မဆို မိမိရင္မွျဖစ္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးကဲ့သို႔ ေမတၲာထားပါလို႔ ''ေမတၲာဆိုတာ အသြားအျပန္ရွိပါတယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေမတၲာပို႔ရင္း သတၲဝါအားလံုးအေပၚမွာ ေမတၲာထားနိုင္ၾကပါေစ…????????????ေမတၱာသုတ္ ပါဠိ**************၁။ ယႆာ ႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ယမွိ ေစ၀ါ ႏုယုဥၨေႏၲာ၊ ရတၱိႏၵိ၀ ‘ မ တႏၵိေတာ။၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။၃။ ကရဏီယ’ မတၳ ကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟု ဇူ စ၊ သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနိ။၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ ‘ န ႏုဂိေဒၶါ။၅။ န စ ခုဒၵ ‘ မာစေရ ကိဥၥိ၊ ေယန ၀ိညဴပေရ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ။သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတ’တၳိ၊ တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ၀ န၀ ေသသာ။ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၲာ၊ မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုက ထူလာ။၇။ ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ၊ ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။ဘူတာ ၀ သမၻေ၀သီ ၀၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည ၊ နာညမညႆ ဒုကၡ ‘ မိေစၦယ်။၉။ မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ ‘ မႏုရေကၡ။ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼႎ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ အသမၺာဓံ အေ၀ရ‘မသပတၱံ။၁၁။ တိ႒ံစရံ နိသိေႏၷာ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာ‘ႆ ၀ိတမိေဒၶါ။ဧတံသတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼ‘ေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ‘မာဟု။၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊န-ဟိ ဇာတုဂၢဗၻ ေသယ် ပုန ေရတိ။ေမတၱ သုတၱံ နိ႒ိတံ။????????????ေမတၱာသုတ္ ျမန္မာအသံထြက္ ရြတ္ဖတ္နည္း**************************၁။ ယတ္သာ ႏုဘာ၀ေတာ ယက္ခါ၊ေန၀ ဒတ္သင္တိ ဘီသနံ။ယင္ညွိေစ၀ါ ႏုယုန္ဇန္ေတာ၊ ရက္တိန္ ဒိ၀ ၊ မ-တန္ဒိေတာ။၂။ သုခံ သုပတိ သုတ္ေတာစ ၊ ပါပံကိန္စိ န-ပတ္သတိ၊ေအ၀ မာဒိ ဂုဏူေပတံ၊ ပရိတ္တံ တံ-ဘဏာမေဟ။၃။ ကရဏီယ မတ္ထကုသေလန၊ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမစ္စ၊သက္ေကာ အုဇူ-စ သု ဟုဇူ-စ၊သု၀ေစာ စတ္သ မုဒု အနတိမာနီ။၄။ သန္တုတ္သေကာ စ သု ဘေရာ စ၊အပ္ပကိတ္ေစာ စ သန္လဟုက ၀ုတ္တိ။သန္တိန္ ဒရိေယာ-စ နိပေကာ-စ၊အပ္ပဂပ္ေဘာ ကုေလသြ, န-ႏုဂိတ္ေဓာ။၅။ န စ ခုတ္ဒ, မာစေရ ကိန္စိ၊ေယန ၀ိန္ညဴ ပေရ ဥပ-၀ေဒယံု။သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ဟြန္တု၊သပ္ဗ သတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ။၆။ ေယ ေကစိ ပါဏ ဘူတတ္ထိ၊တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ ၀၊ န၀ ေသသာ။ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟန္တာ၊မစ္စ်ိမာ ရတ္သကာ အဏုက ထူလာ။၇။ ဒိတ္ထာ ၀ါ ေယ၀ အ ဒိတ္ထာ၊ေယ၀ ဒူေရ ၀သန္တိ အ ၀ိဒူေရ။ဘူတာ၀ သမ္ဘေ၀ သီ၀၊သပ္ဗ သတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ။၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုတ္ေဗထ၊နာတိမင္ေညထ ကတ္ထစိ န ကိန္စိ။ဗ်ာေရာသနာ ပတိဃ သင္ည၊နင္ည မင္ညတ္သ ဒုတ္ခ မိတ္ေဆယ။၉။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတ္တ၊မာယုသာေအက ပုတ္တ မႏုရက္ေခ။ေအ၀မ္ပိ သပ္ဗ ဘူေတသု၊မာနသံ ဘာေ၀ေယ အ-ပရိမာဏံ။၁၀။ မစ္တင္စ သပ္ဗ ေလာက သမိန္၊မာနသံ ဘာ၀ေယ အ ပရိမာဏံ။အုတ္ဓံ အေဓာ စ တိရိယင္စ၊အ သမ္ဗာဓံ အေ၀ရ မ သပတ္တံ။၁၁။ တိတ္ထံ စရံ နိသိန္ေနာ ၀၊အ သမ္ဗာဓံ အေ၀ရ မ သပတ္တံ၊သယာေနာ ယာ၀တတ္သ ၀ိတ မိတ္ေဒါ။ေအတံ သတိန္ အဓိတ္ေထယ၊ျဗန္မ, ေမတံ ၀ိဟာရ, မိဓ, မာဟု။၁၃။ ဒိတ္ထိန္စ အႏုပက္ဂမ္မ၊ သီလ ၀ါ ဒတ္သေနန သမ္ပန္ေနာ။ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊န ဟိ ဇာတုတ္, ဂပ္ဘ, ေသယ ပုန ေရတိ။မစ္တ သုတ္တံ နိတ္ထိတံ……။????????????ေမတၱသုတ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳးခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရႏိုးရေစသည္။ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား မမက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာ ၾကည္လင္၍ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားလိမ့္မည္။ အိပ္ခါနီးဆဲဆဲမွာ ရြတ္ၿပီးအိပ္လွ်င္ ညအခါ ဘီလူးစီးျခင္း၊ ေယာင္ယမ္း၍ ထေျပးျခင္း၊ အိပ္ေနရင္း အသံနက္ႀကီးျဖင့္ ေအာ္ျခင္း၊ အိပ္ရာနားရွိ ေတြ႔ကရာ ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ ေယာင္ယမ္းၿပီး ပစ္ေပါက္ျခင္း စသည္တို႔ ကင္းသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္သူမ်ားသည္ အထူးတလည္ ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္သင့္ေပသည္။????????????ေမတၱသုတ္ ျမန္မာျပန္*******************၁။ ေမတၱသုတ္၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ဘီလူး၊ ဘုမၼစိုးတို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ရုပ္အဆင္းကို ဖန္ဆင္း၍ လူတို႔အား မျပဝံ့ၾကကုန္။ ေမတၱသုတ္ေတာ္ကို ညဥ့္အခါ၌၎၊ ေန႔အခါ၌၎ မပ်င္းမရိ ရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိေသာသူသည္ -၂။ အိပ္ေသာအခါ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရေလ၏။ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္၌လည္း အိပ္မက္ဆိုးကို မျမင္မက္ႏိုင္။ ဤသို႔ေသာ ေက်းဇူးဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေပါင္း ရြတ္ဆိုၾကပါကုန္စို႔။၃။ အက်ိဳးစီးပြား၌ လိမၼာေသာသူသည္ ၿငိမ္သက္စြာေသာ နိဗၺာန္သို႔ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္ျခင္းကို ျပဳရာသည္။ ျပဳႏိုင္စြမ္း ရွိသူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ ေကာင္းစြာေျဖာင့္မတ္ရာ၏။ ပညာရွိတို႔ ဆိုလြယ္ ဆုံးမလြယ္သူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ရာ၏။ မာန္မာန မထားရာ။၄။ ေရာင့္ရဲလြယ္ရာ၏။ သူတပါးတို႔က ျပဳစုလြယ္၊ ေမြးျမဴလြယ္သူမ်ိဳး ျဖစ္ရာ၏။ ကိစၥနည္းေစရာ၏။ အသက္ေမြးမႈ ေပါ့ပါးျခင္း ရွိရာ၏။ မ်က္စိ စေသာ ဣေျႏၵ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိရာ၏။ အမူအရာ မၾကမ္းတမ္းေစရာ။ ဒါယကာမ်ား ေဆြမ်ိဳးမ်ား၌ သံေယာဇဥ္ ညိွတြယ္လြန္းျခင္း မျဖစ္ေစရာ။၅။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈ တစုံတခုကို အနည္းငယ္မွ်ပင္ မျပဳမက်င့္ရာ။ သတၱဝါခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေဘးမရွိပါေစႏွင့္။ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။၆။ အသက္ရွဴရွိက္ေသာ သတၱဝါအားလုံး၊ ထိတ္လန္႔လြယ္ေသာ သတၱဝါအားလုံး၊ တည္ၾကည္ေသာ သတၱဝါအားလုံး၊ ကိုယ္ခႏၶာရွည္ေသာ သတၱဝါအားလုံး ၊ ႀကီးေသာ သတၱဝါအားလုံး၊ မတိုမရွည္ မႀကီးမငယ္ အလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ သတၱဝါ၊ ပုေသာ တိုေသာ သတၱဝါ၊ ပိန္ေသာ ၾကဳံေသာ သတၱဝါ ၊ ဆူေသာ ၿဖိဳးေသာ သတၱဝါ။၇။ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ႏိုင္ေသာ သတၱဝါ၊ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ သတၱဝါ၊ အေဝးမွာရွိေသာ သတၱဝါ၊ မနီးမေဝးမွာရွိေသာ သတၱဝါ၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ သတၱဝါ၊ ေနာင္ျဖစ္လတၱံေသာ သတၱဝါ၊ ဆိုခဲ့ပါ သတၱဝါအားလုံးသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္သတည္း။၈။ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ အမ်က္ေဒါသ မထြက္ရာ၊ အလုပ္ကိစၥ တခုခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တေယာက္ေယာက္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာစကား မေျပာရာ၊ မုန္းတီးေသာစိတ္ျဖင့္ အမွတ္မထားရာ၊ အနည္းငယ္မွ် မထီမဲ့ျမင္ မထင္ေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ဆင္းရဲဒုကၡကို အလို မရွိသင့္ေပ။၉။ အမိသည္ မိမိဝမ္း၌လြယ္၍ ေမြးရေသာ တဦးတည္းေသာသားကို အသက္ေလာက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ အစဥ္မျပတ္ ေစာင့္ ေရွာက္သည့္နည္းတူ သတၱဝါအားလုံးတို႔အေပၚ၌ အတိုင္းမသိ ႀကီးမားေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားရာ၏။၁၀။ အထက္ေအာက္ ေဘးဘီ အရပ္မ်က္ႏွာအားလုံး အက်ဥ္းအေျမာင္းမရွိ၊ အတြင္းရန္ အျပင္ရန္မရွိ၊ အတိုင္းမသိ ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားေစရာ၏။၁၁။ အိပ္ငိုက္ေသာအခါမွတပါး မတ္တပ္ရပ္စဥ္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေလွ်ာက္သြားေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ထိုင္ေနစဥ္ ျဖစ္ေစ၊ လဲေလ်ာင္းေနစဥ္ျဖစ္ေစ အျမဲမျပတ္သတိခ်ပ္လ်က္ ေမတၱာပို႔ေနရာ၏။ ယင္းသို႔ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အျမဲမျပတ္ေနျခင္း၊ ထိုင္ျခင္းကို “ျမတ္ေသာေနျခင္း”ဟူ၍ ဤေဂါတမဘုရား သာသနာေတာ္၌ ဆိုၾကေလၿပီ။၁၂။ မွားေသာအယူဝါဒကို လက္မခံဘဲ ကိုယ္က်င့္သီလ ရွိေစရာ၏။ မဂ္ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စုံေစရာ၏။ ကိေလသာအာရုံ ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ ဤသို႔ေသာ လူမ်ိဳးသည္ မိခင္ဝမ္း၌ တဖန္ ပဋိသေႏၶ မေနရေတာ့ေပ။ (ဝဋ္ဘဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္ေပလတၱံ)အဓိပၸါယ္နားလည္ထားၿပီဆိုရင္ပုံမွန္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ၾကည့္ပါဟုတိုက္တြန္းပါရေစ….Credit to orginal uploader???ဓမၼအသိျဖင့္ အက်ဳိးရွိရွိေနမည္ ???
Posted by ဓမၼအသိျဖင့္အက်ိဳးရွိရွိေနမည္ on Friday, 31 July 2020
၁။ မေတ္တသုတ်၏ အာနုဘော်ကြောင့် ဘီလူး၊ ဘုမ္မစိုးတို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင် ရုပ်အဆင်းကို ဖန်ဆင်း၍ လူတို့အား မပြဝံ့ကြကုန်။ မေတ္တသုတ်တော်ကို ညဥ့်အခါ၌၎င်း၊ နေ့အခါ၌၎င်း မပျင်းမရိ ရွတ်ဖတ်လေ့ရှိသောသူသည် – ၂။ အိပ်သောအခါ ချမ်းသာစွာ အိပ်ရလေ၏။ အိပ်ပျော်နေစဉ်၌လည်း အိပ်မက်ဆိုးကို မမြင်မက်နိုင်။ ဤသို့သော ကျေးဇူးဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော မေတ္တသုတ် ပရိတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်း ရွတ်ဆိုကြပါကုန်စို့။၃။ အကျိုးစီးပွား၌ လိမ္မာသောသူသည် ငြိမ်သက်စွာသော နိဗ္ဗာန်သို့ ဉာဏ်ဖြင့် သက်ဝင်ခြင်းကို ပြုရာသည်။ ပြုနိုင်စွမ်း ရှိသူလည်း ဖြစ်ရာ၏။ ကောင်းစွာဖြောင့်မတ်ရာ၏။ ပညာရှိတို့ ဆိုလွယ် ဆုံးမလွယ်သူလည်း ဖြစ်ရာ၏။ နူးညံ့ သိမ်မွေ့ရာ၏။ မာန်မာန မထားရာ။ ၄။ ရောင့်ရဲလွယ်ရာ၏။ သူတပါးတို့က ပြုစုလွယ်၊ မွေးမြူလွယ်သူမျိုး ဖြစ်ရာ၏။ ကိစ္စနည်းစေရာ၏။ အသက်မွေးမှု ပေါ့ပါးခြင်း ရှိရာ၏။ မျက်စိ စသော ဣန္ဒြေ တည်ငြိမ်မှု ရှိရာ၏။ အမူအရာ မကြမ်းတမ်းစေရာ။ ဒါယကာများ ဆွေမျိုးများ၌ သံယောဇဉ် ညှိတွယ်လွန်းခြင်း မဖြစ်စေရာ။၅။ ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့ဖွယ်ဖြစ်သော မကောင်းမှု တစုံတခုကို အနည်းငယ်မျှပင် မပြုမကျင့်ရာ။ သတ္တဝါခပ်သိမ်း ချမ်းသာကြပါစေ။ ဘေးမရှိပါစေနှင့်။ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ ၆။ အသက်ရှူရှိက်သော သတ္တဝါအားလုံး၊ ထိတ်လန့်လွယ်သော သတ္တဝါအားလုံး၊ တည်ကြည်သော သတ္တဝါအားလုံး၊ ကိုယ်ခန္ဓာရှည်သော သတ္တဝါအားလုံး ၊ ကြီးသော သတ္တဝါအားလုံး၊ မတိုမရှည် မကြီးမငယ် အလယ်အလတ်ဖြစ်သော သတ္တဝါ၊ ပုသော တိုသော သတ္တဝါ၊ ပိန်သော ကြုံသော သတ္တဝါ ၊ ဆူသော ဖြိုးသော သတ္တဝါ။၇။ မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သော သတ္တဝါ၊ မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော သတ္တဝါ၊ အဝေးမှာရှိသော သတ္တဝါ၊ မနီးမဝေးမှာရှိသော သတ္တဝါ၊ ဖြစ်ပြီးသော သတ္တဝါ၊ နောင်ဖြစ်လတ္တံသော သတ္တဝါ၊ ဆိုခဲ့ပါ သတ္တဝါအားလုံးသည် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း။ ၈။ တယောက်နှင့် တယောက် အမျက်ဒေါသ မထွက်ရာ၊ အလုပ်ကိစ္စ တခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တယောက်ယောက်ကို ချုပ်ချယ်သောစကား မပြောရာ၊ မုန်းတီးသောစိတ်ဖြင့် အမှတ်မထားရာ၊ အနည်းငယ်မျှ မထီမဲ့မြင် မထင်ကောင်း၊ အချင်းချင်း တယောက်နှင့်တယောက် ဆင်းရဲဒုက္ခကို အလို မရှိသင့်ပေ။၉။ အမိသည် မိမိဝမ်း၌လွယ်၍ မွေးရသော တဦးတည်းသောသားကို အသက်လောက် ချစ်မြတ်နိုး၍ အစဉ်မပြတ် စောင့် ရှောက်သည့်နည်းတူ သတ္တဝါအားလုံးတို့အပေါ်၌ အတိုင်းမသိ ကြီးမားသော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများရာ၏။ ၁၀။ အထက်အောက် ဘေးဘီ အရပ်မျက်နှာအားလုံး အကျဉ်းအမြောင်းမရှိ၊ အတွင်းရန် အပြင်ရန်မရှိ၊ အတိုင်းမသိ မြတ်နိုးတတ်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများစေရာ၏။၁၁။ အိပ်ငိုက်သောအခါမှတပါး မတ်တပ်ရပ်စဉ်ဖြစ်စေ၊ လမ်းလျှောက်သွားနေစဉ်ဖြစ်စေ၊ ထိုင်နေစဉ် ဖြစ်စေ၊ လဲလျောင်းနေစဉ်ဖြစ်စေ အမြဲမပြတ်သတိချပ်လျက် မေတ္တာပို့နေရာ၏။ ယင်းသို့ မေတ္တာစိတ်နှင့် အမြဲမပြတ်နေခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းကို “မြတ်သောနေခြင်း”ဟူ၍ ဤဂေါတမဘုရား သာသနာတော်၌ ဆိုကြလေပြီ။ ၁၂။ မှားသောအယူဝါဒကို လက်မခံဘဲ ကိုယ်ကျင့်သီလ ရှိစေရာ၏။ မဂ်ဉာဏ်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံစေရာ၏။ ကိလေသာအာရုံ ကာမဂုဏ်တို့၌ တပ်နှစ်သက်ခြင်းကို ပယ်ဖျောက်ရာ၏။ ဤသို့သော လူမျိုးသည် မိခင်ဝမ်း၌ တဖန် ပဋိသန္ဓေ မနေရတော့ပေ။ (ဝဋ်ဘဝ ချုပ်ငြိမ်း၍ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ ရောက်ပေလတ္တံ) #credit
ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကြီး ဂျက်ကီချန်းက ဧရာဝတီလင်းပိုင်တွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ပြောလာတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်
၁၈ ကြိမ်မြောက် သိန်း၁၅၀၀၀ ကံထူးရှင်ပေါ်လာပြီဗျာ…(ဂုဏ်ယူပါတယ်အကိုရေ..)